Siya udokotela emva nokuqala kwemihelo-ubuhlungu emuva, futhi uye kwatholakala ukuthi une-"isihlabathi izinso?" Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa kungenzeka kubangelwa ukuhlehliswa amakristalu ezincane "zokuhlunga" izitho. Indlela ukuphulukisa isihlabathi izinso izindlela zokwelapha ezivamile, utshele udokotela wakho. Esihlokweni esifanayo indlela kazwelonke, evunywe ochwepheshe futhi lwahlolwa practice. Uma zimlandele akudingeki imithi ezibizayo. Indlela kusekelwe ukusetshenziswa kwemikhiqizo yemvelo futhi inikeza ukuthi ukuzikhandla ngokomzimba okudingekayo emva ukusetshenziswa ukuphulukiswa ingxube. Kodwa okokuqala, izincomo ezimbalwa nokulungiselela futhi ubambe zokuhlanjululwa.
Ingabe ukhathazekile ngokufaka isihlabathi izinso? Indlela ayibulale nge ingozi okungenani?
Kungakhathaliseki ukuthi ukuphathwa unqume ukushela, - yezokwelapha noma abantu, noma kunjalo, udinga ukuthobela imibandela emibili:
Kuyisibopho Nokuhlola kokuqala usebenzisa ultrasound ukuqeda khona amatshe amakhulu, okuyinto lapho ushiya isihlabathi bangavimbela ureters ngibangele ukuba esiqine ubuhlungu ukuhlaselwa;
ukwelashwa kufanele afundziswe ngekuhlanganiswa mkhosi okuqinile olukhethekile lokudla.
Indlela esiphatha ngayo ngokufaka isihlabathi amakhambi izinso abantu? Ukuhlanzwa indlela usebenzisa glycerin nolamula
Iziguli eziningi uqaphela ukuthi ngezinye izikhathi yokwamukela izidakamizwa ezahlukene akukuniki umphumela oyifunayo. Izenzo sifo Awekho izinguquko ebonakalayo sekuhloliwe okuphindaphindiwe wathola EsiZulwini asinayo okwatholakala isihlabathi nezinso. Uma mini-usayizi amatshe amancane, ungazama indlela yokususa nabo lemon glycerin. Yonke inqubo kungenziwa ihlukaniswe izigaba ezimbili:
wokuqala - ukudla izingxenye ezincane ingxube njalo ngezikhathi ezithile;
yesibili - aphume isihlabathi.
Isigaba sokuqala, bengangesihlabathi esisogwini iphathwa nezinso. Ukwamukelwa ingxube
Eziyishumi Lemon geza usike, asuse amathambo ukuza ngaphesheya.
Ngesikhathi inyama egayiwe izithelo ikhasi.
Ungqimba kwaphumela lufakwa embizeni ezintathu-litre bese ugcwalisa ezimbili amalitha amanzi abilisiwe (efudumele).
Engeza ukuxubana ezintathu wezipuni glycerine.
Shiya on for isigamu sehora sokunika lemon uketshezi ke nzima.
Thatha nenye ingilazi eyodwa njalo ngemva kwemizuzu eyishumi. Kuzothatha amahora engaphezudlwana kwemibili. Kungcono zokwelapha ukusetshenziswa Izingxube kwenziwe kusihlwa, ngaphambi kokulala, isibonelo kusuka amahora 20 kuya 22.
Emva kokuthola ke ulale, axube ngemuva izinso kusuka zombili warmers efudumele. Kuyinto efiselekayo ayisekho ngivuke bese ngiyolala.
Eyesibili esiteji, bengangesihlabathi esisogwini iphathwa nezinso. umsebenzi okuphoqelekile ngokomzimba futhi edonsa ukumnika herbal
Kuzoqalwa nge-ngakusasa, thatha knotweed ukwenziwa ngokulandela imiyalelo ku iphakethe. isixazululo Engamakhambi kufakwe ekudleni kwakho izinsuku eziyishumi. Sonke lesi sikhathi lo umsebenzi saziso ngefomu elide (okungenani amabili, noma amahora amabili nesigamu). Uyozizwa izimpawu ezingemnandi isihlabathi okukhipha - encane kabuhlungu ngesikhathi ukuchama.
Kanjani ukuletha isihlabathi izinso indlela ehlongozwayo ngaphandle empilweni?
Kule ndlela, kukhona ezinye Izimo ukusetshenziswa. Akunconyelwe izinso ukuhlanzwa ulamula kulabo abaphethwe izifo yaleli pheshana emathunjini bese isibindi. Ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo nge-asidi eningi kungathinta lezi zitho. Kukhona ingozi exacerbation zezinkinga ezikhona zempilo. Ngakho qiniseka ngaphambi kokuqala self-isheke nge Urologist yakho.
Basic nezikhathi ukushisa komzimba: Incazelo
Appendicitis uzelwe eminyakeni 7: Izimpawu, Izimbangela
Ngenxa esinqumeni kanzima ukuphuza: Amathiphu Imiyalelo
Salmon Atlantic (Salmon). Calorie, okunempilo futhi umsoco izinhlanzi
Smart olungami ( "MTS"): ukubuyekezwa kanye incazelo tariff
Pension "Blue Bay" eCrimea (Koktebel): incazelo, amakamelo, ukubuyekezwa
Bonisa ku emjahweni: kudlule indlela yokuhlola ukushayela?
Imithetho umdlalo basketball
Kiwi - calorie izithelo enempilo
"Stealth Miss 5000" - a ngebhayisikili stylish, egcizelela ukuthi ungubani owesifazane